सात महिना लगाएर कस्तो उपहार बनाइछन् सन्नी लियोनले ?
Friday, 1 Jun, 2018 2:59 PM
बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोन पछिल्लो समय फेरी चर्चामा आएकी छन् । हालसालै उनले इन्स्टाग्राममा एक हृयान्डमेड गिफ्टको फोटो पोस्ट गरेकी थिइन्, जुन उनले आफ्नो छोरी निशा कौर वेबरको लागि बनाएकी हुन् ।
उनले ७ महिना लगाएर एक सुन्दर क्रिस्टल बेडेड पिस तयार गरेकी छिन् । यसमा उनले हजारौं क्र स्टल जोडेर एक सुन्दर कलाकृति बनाएकी छिन् । उनले पोस्टमा भनेकी छिन्, ‘तपार्इंहरुलाई याद छ ? मैले ७ महिना पहिले अक्टोबर मा एक पोस्ट गरेको थिँए । त्यतिबेला मैले मेरो छोरीको लागि एक विशेष काम सुरु गरेको थिँए ।’
‘हजारौं क्रिस्टलको सहायताले यो उपहार बनेर तयार भएको छ । जसलाई मैले आफ्नै हातले बनाएको हुँ । अन्तिममा राती १ बजेसम्म नसुती मैले यसलाई पूर्ण बनाएको छु र मलाई अझै एकिन नै छैन यो तयार भैसक्यो’ सन्नीले लेखेकी छिन् । उनका अनुसार यो काम गर्न धेरै समय लाग्यो र यो उपहारको हरेक पत्थर उनले आफ्नो छोरीलाई याद गदै राखेकी थिइन् । यसले आफ्नो छोरीलाई उनले कति माया गर्छिन भन्ने देखाउने उनले बताएकी छिन् ।